I-Metisse, i-Musca, i-MWM, i-OpenBox ne-PekWM: ama-WM amanye ama-5 we-Linux | Kusuka kuLinux
Namuhla siyaqhubeka nesethu okuthunyelwe kwesithupha mayelana ne Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi), lapho sizobuyekeza khona okulandelayo 5, kusuka ohlwini lwethu lwe 50 okuxoxwe ngaphambilini.
"NOMAn Imenenja yeWindi esekwe ku-X yakhelwe inemigomo emibili engqondweni. Okokuqala ukwenza kube lula kubacwaningi be-HCI ukuklama nokusebenzisa izindlela ezintsha zokuphathwa kwamawindi. Futhi okwesibili, dala i-WM eqondiswe kumazinga akhona (esikhathi sayo), kepha inamandla futhi isebenza kahle ngokwanele ukuthi isetshenziswe nsuku zonke, ukuze ibe yipulatifomu eyanele yokuhlola amasu ahlongozwayo.".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina watholakala eminyakeni eyi-12 eyedlule.
Kwakungathathwa njengesiphakamiso sedeskithophu entsha, kepha njengethuluzi lokwenza izinhlobo ezintsha zezindawo zedeskithophu.
Isetshenzisiwe, ngokwesibonelo, ukusebenzisa uhlelo lwe-User Interface Façade, uhlelo oluvumela ukuguqulwa, ukulungiswa kabusha kanye nokuhlanganiswa kabusha kwezikhombisi-ndlela zokuqhafaza ezikhona kusetshenziswa amasu okukhohlisa aqondile.
Iphinde yasetshenziselwa ukwenza amakhophi nokuhambisa imisebenzi, nokuhlanganisa izixhumi ze-GTK + kumdlalo we-OpenGL-based Pok3D.
Yasatshalaliswa njenge- "Live CD" nguMandriva ekuqaleni kuka-2007, futhi yayitholakala njengenye yezindlela ezijwayelekile zokuhlelwa kwedeskithophu ekusatshalalisweni kweMandriva Linux.
“UMusca ungumphathi wewindi olula weX ovumela imodi yeTiling neStacking. Iyafana ne-Ratpoison kepha igundane elinobungane futhi lisebenzisa ukuzula okulula kwengwe".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina watholakala cishe eminyakeni engu-3/1 edlule. Yize, inguqulo yayo yokugcina ekhishwe kubonakala sengathi ibingaphezu nje kweminyaka engu-2 edlule.
Kwakungekho imigoqo yesimo eyakhelwe ngaphakathi, amapaneli, noma imihlobiso yamawindi, ngaphandle kwamaphethelo ewindi amancane akhombisa ukugxila. Futhi, isekele ukusebenza kwezikrini eziningi.
Ukuzulazula kwewindi kungaba ngokuchofoza igundane ukugxila noma ukuholwa ngokuphelele yingwe. Ukubekwa kwamawindi bekungokwesandla kodwa kulula, futhi bekungekho mingcele yokuthi ungahlukaniswa kanjani isikrini.
Usebenzise insiza ye-dwm "dmenu" ukuqalisa izinhlelo zokusebenza nokusebenzisa imiyalo ehlukahlukene eyakhelwe ngaphakathi engakhelwanga ama-hotkey.
I-interface yayo yayinembile. Amanani ayo ezenzakalelayo abhekwa njengokulula futhi okulula ukuqondakala. Kubhekwe ukuthi kusebenza kahle ngokwendawo. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokuqoqwa kwale mphathi lwalusondele kuma-desktops wamanje abonakalayo.
Ngeminye imininingwane yokuthi isetshenziswe kanjani, okulandelayo kunikwe amandla isixhumanisi.
“IMotif Window Manager (MWM) iyimenenja ye-X window ngokususelwa kwi-Motif Toolkit.".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe ezinyangeni ezi-3 ezedlule, yize inguqulo yawo yakamuva yakhishwa cishe eminyakeni emithathu eyedlule.
Kubhekwa njenge-WM elula kakhulu, kepha ngokusebenza okuhle nezilungiselelo ezinhle.
Inikeza i-interface yomsebenzisi esekela ukusetshenziswa kwe- «Alt-Tab» yokushintsha amawindi, futhi enikezela nge-Desktop Environment ejwayelekile, i-X Resource Database (/ home / app-defaults / and runtime), umthetho olandelwayo we-X Session Manager, umthetho olandelwayo we-X (amawijethi) olandelwayo, isethi yezithonjana zedeskithophu, ukusetshenziswa kokuzikhethela kwezithombe zokuhlobisa, nokusekelwa okungahlobene nobuso bekhompuyutha.
Ukuphatha amawindi, isebenzisa ifayili lombhalo ocacile ukwenza ngokwezifiso amamenyu, ukufeza imephu yokufaka yomsebenzisi, ukuphatha izici zokuphatha nemisebenzi eyenziwe umsebenzisi.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "mwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi noma lokhu okunye isixhumanisi.
"Imenenja yefasitela yesizukulwane esilandelayo ebekeka kahle kakhulu enokusekelwa kwamazinga abanzi".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe eminyakeni engaphezu kwengu-5 edlule. Yize, inguqulo yayo yokugcina ekhishwe (3.4.11) yayingaphezulu nje kweminyaka eyi-10 edlule. Kodwa-ke, kukhona inguqulo ebuyekezwe kakhulu, engu-3.6.1 okuyiyona enezinguquko zakamuva.
Kuyaziwa ngokubukeka kwayo okuncane. Kususelwa ku-BlackBox ngakho-ke isebenzisa isitayela sokubuka esifanayo noma esihambisanayo, ngenkathi inikeza inani elikhulu lezinketho zabathuthukisi betimu kunalokho okufanayo noma okufanayo.
Ikuvumela ukuthi uphathe kahle izinhlelo zokusebenza ngaphandle kwendawo egcwele yedeskithophu. Ngaphezu kwakho konke, izinhlelo zokusebenza eziningi ezibhalelwe i-GNOME ne-KDE. Ngokwengeziwe, kufaka phakathi ukusekelwa kwamazinga wakamuva kusuka ku-freedesktop.org, kanye nokunamathela ngokucophelela kumazinga amadala. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa njenge-WM yezinye izindawo zedeskithophu, okwenza lokhu kube ngcono.
Kuyinto okulungisekayo kakhulu, ngakho-ke, ivumela ukushintsha cishe zonke izici ezibonakalayo nezisebenzayo ezihlobene nokusetshenziswa kwedeskithophu nokusungula izindlela ezintsha ngokuphelele zokuyisebenzisa nokuyilawula. Ngendlela yokuthi ukusetshenziswa okuthuthukile kungenziwa ngayo, kepha futhi kungagcinwa kulula kakhulu, kugcinwe ukumiswa kwayo okuzenzakalelayo, okusho ukuthi kungashintshelwa cishe kunoma ngubani, ngenkathi inika amandla ngaphandle kokuphoqa ukwenza noma yini esezingeni eliphakeme noma eyinkimbinkimbi. .
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "ibhokisi lokuvula"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi noma laba abanye isixhumanisi y isixhumanisi.
"NOMAImenenja yefasitela eyayikade isuselwe kumphathi wewindi we-aewm ++, kepha iguqukele ngokwanele ukuthi ayisafani ne-aewm ++. Inesethi yesici esandisiwe kakhulu, kufaka phakathi ukuqoqwa kwamawindi (okufana ne-ion, i-pwm, noma i-fluxbox), ama-autoproperties, i-xinerama, i-keygrabber esekela ama-keychains, nokunye okuningi.".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina watholakala cishe eminyakeni engaphezu kwengu-1/1 edlule. Yize, inguqulo yayo yokugcina ekhishwe (2) yayingaphezulu nje kweminyaka engu-0.1.13 edlule. Kodwa-ke, kukhona inguqulo ebuyekezwe ngokwengeziwe ekuthuthukisweni, i-9 okuyiyona enezinguquko zakamuva.
Ikhanya kakhulu futhi ihlakaniphile, okuyinikeza isici sokuba umphathi wewindi ongabonakali neze.
Inokulungiswa okuphezulu, ukuvumela abasebenzisi abaningi ngangokunokwenzeka ukuthi basebenze futhi bavumelane noma bakwenze ngezifiso ngezindlela eziningi ezahlukahlukene.
Inikeza izakhiwo noma izilungiselelo ezizenzakalelayo, kulabo basebenzisi, abangafuni ukwenza izinto ezithuthukile kepha abafuna izinto zivele ngendlela okufanele benze ngayo lapho kuqala izinhlelo zokusebenza, okusho ukuthi, zisebenze njenge-WM ephelele yendabuko ephelele.
Kufaka phakathi ukusetshenziswa kwe-Keygrabber e-chainable, ukusebenziseka okukhulu kubo bonke.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "pekwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi futhi lokhu isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-5 ezilandelayo «Gestores de Ventanas», ezimele kunoma iyiphi «Entorno de Escritorio»ubizile I-Metisse, i-Musca, i-MWM, i-OpenBox ne-PekWM, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Metisse, i-Musca, i-MWM, i-OpenBox ne-PekWM: ama-WM amanye ama-5 we-Linux
I-Apache OpenMeetings 5.0, inketho enhle kakhulu yokwenza i-server yakho yenkomfa